Mark Ferrari dia mpanakanto pixel ary asehony amin'ity horonantsary ity | Famoronana an-tserasera
Ny Retro sy ny pixelated dia niverina niaraka taminay tamin'ny hery lehibe Noho ny filàna lalao video ho an'ny fitaovana finday na amin'ny Android na amin'ny iOS, izay ilana fanomezana kalitao tsara hita maso, saingy tsy misy izany fanjifana bateria avo lenta izany.
Amin'izany filàna izany fantaro ny fitaovana tsara indrindra Mba hamoronana an'ity karazana zavakanto misy pixelated ity, indraindray dia afaka manjavozavo isika hahatakatra fa tsy ilaina ny mandeha amin'ny Photoshop hamokarana fomba fijery Retro misy valiny lehibe, fa mety ho mora kokoa ny manao azy, araka ny fanazavan'i Mark Ferrari ao amin'ity horonan-tsary ity. .
Ferrari dia manazava ny sasany amin'ireo teknika momba ny fanaovana sary 8-bit izay antsoina hoe «8 bitish». Amin'ity fampisehoana ity dia asehony ny sasany amin'ireo paikadiny malaza kokoa amin'ny fampiasana bisikileta miloko sy ny palette switching mba hamoronana vokarin'ny sary mihetsika sarotra sy mitombina nefa tsy mandalo sary mihetsika by frame.
Io koa rehefa mandray ny fitenenana izy haneho hevitra momba ny iray amin'ireo sangan'asany farany amin'ny lalao Retro fitsangatsanganana Thimbleweed Park nataon'i Ron Gilbert. Ampiasao ny Photoshop hanehoana teknika hafa sy ny fomba isian'ny fitaovana maromaro afaka mamaritra ny fomban'ny tenany manokana raha ny momba io zavakanto retro pixelated io.
Ny rohy mankany amin'ilay horonan-tsary mitovy ve izany ary afaka mandeha amin'ny lohahevitra lehibe indrindra mitovy amin'izany ianao amin'ny safidy etsy ankavia, toy ny fiandohan'ny fizotrany manomboka amin'ny inona ireo kisary voalohany mankany amin'ireo modely. Ferrari dia manao jery todika tsara ao amin'ilay horonantsary hahafenoanao fepetra mandray anjara amin'ny Retro asanay izay malaza amin'ny finday ankehitriny.
Fitsaboana manokana hita maso izay manam-pahaizana i Ferrari ary tsy misy tsara noho izy handinika ny lohahevitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Mark Ferrari dia manazava amin'ny teknika fanaovana sary 8bit sary ho an'ny lalao Retro